ट्रम्प महाभियोग: अमेरिकी सांसदले हेरे ट्रम्पविरुद्ध गरिएको उजुरी - USNEPALNEWS.COM
- यूस नेपाल न्युज प्रकाशित मिति: September 26, 2019
अमेरिकी संसद्का सदस्यहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउन माग उठ्नेगरी परेको उजुरी पहिलो पटक हेरेका छन्।
गुप्तचर विभागसँग सम्बद्ध एक गोप्य सूचनादाताले ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपतिसँग गरेको विवादास्पद फोनवार्ताबारे उजुरी गरेका थिए।
डेमोक्र्याट तथा रिपब्लिकन सांसदले त्यो उजुरी विचलित पार्ने खालको भएको बताएका छन्।
सो विषयमा अमेरिकी गुप्तचर विभागका कार्यवाहक निर्देशकले बयान दिन लागेको बेला यो नयाँ घटनाक्रम विकसित भएको हो।
गुप्तचरीसम्बन्धी विषय हेर्ने संसदीय समितिमा बिहीवार जोजेफ मग्वाएरले भन्ने कुरालाई ध्यानपूर्वक सुनिनेछ।
उक्त उजुरी अझै गोप्य राखिएको छ। अमेरिकी सिनेटका वरिष्ठतम सदस्य चक शुमरले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
बुधवार राति एउटा प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै ट्रम्पले महाभियोगको प्रक्रियालाई “जाली” र “नियतवश लखेट्न खोजेको” भनेका छन्।
जुलाई २५ मा गरिएको फोनवार्ताको लिखित प्रतिलिपिमा राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनी नेता भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई जो बाइडनका छोरा संलग्न भएको दाबी गरिएको एउटा विषयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन आग्रह गरेका बेहोरा देखिन्छ।
युक्रेनसम्बन्धी विषयमा बाइडन बावुछोराले अनुचित काम गरेको प्रमाण छैन।
एउटा ट्वीटमा बाइडनले राष्ट्रपति ट्रम्पले “शक्ति दुरुपयोग गरेको” आरोप लगाएका छन्।
नयाँ कुरा के छ?
ट्रम्पविरुद्ध गरिएको उजुरी बुधवार कङ्ग्रेसलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार उजुरी ट्रम्प-‍जेलेन्स्की फोनवार्ताबारे मात्र नभई ह्वाइट हाउसका कर्मचारीले कसरी रेकर्ड गरे भन्नेबारे पनि छ।
संसदीय समितिका अध्यक्ष एडम शिफले भने, “मैले ती आरोप एकदमै विचलित पार्ने खालको पाएँ।”
“ती आँटिला व्यक्तिले जे गरे त्यसले गम्भीर बदमासीको खुलासा भएको छ,” ती सुराकीलाई सङ्केत गर्दै शिफले भने।
“तपाईँलाई जोगाउन हामी यथासम्भव सबै गर्नेछौँ।”
सांसदहरूले ती सुराकीको कुरा पनि सुन्न पाइने अपेक्षा गरेका छन् तर उनीसँग कुनै भेट निश्चित भएको छैन।
डेमोक्र्याट पार्टीका समिति सदस्य माइक क्विग्लीले उक्त उजुरी एकदमै विचलित पार्ने खालको भएको टिप्पणी गरेका छन्। रिपब्लिकन पार्टीका सिनेट सदस्य तथा सिनेटको इन्टेलिजन्श समिति सदस्य बेन सासले त्यसमा “साँच्चै चिन्ता लाग्ने कुरा” भएको बताएका छन्।
रिपब्लिकनहरूले खालि ट्रम्पलाई संरक्षण गर्नु नपर्ने उनको धारणा छ।
तर अर्का रिपब्लिकन सदस्य माइक कनवेले आफूले कुनै आपत्तिजनक कुरा नभेटेको र त्यसबाट ट्रम्पलाई कुनै हानि नपुग्ने बताएका छन्।
उजुरीको विषयवस्तु सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै शुमरले भने, “ती सुराकीले गरेको उजुरी पढ्ने अधिकार सर्वसाधारण जनतालाई छ।”
महाभियोगसम्बन्धी छानबिन के हुँदैछ?
ट्रम्पले विदेशी सहयोग लिएर जो बाइडनलाई बदनाम गर्न खोजेको र अमेरिकाले गर्ने वैदेशिक सहयोगलाई आफ्नो मोलतोलको साधन बनाएको आरोप डेमोक्र्याटहरूले लगाएका छन्।
अमेरिकी संविधानअनुसार “देशद्रोह, घुसखोरी वा अन्य ठूला अपराध र मिस्डिमीनर भनिने अलि कम गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा” राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन मिल्छ। संसद्का दुवै सदनबाट महाभियोग पारित भए राष्ट्रपति पदमुक्त हुन्छन्।
जुलाईमा ट्रम्पले युक्रेनलाई दिइने सैन्य सहायता रोकिदिएका थिए। तर उनले युक्रेनलाई दबाव दिन त्यसो नगरेको दाबी गरेका छन्।
धुलिखेल अस्पताल सिल्ड